Internetka Waxyaabaha Ayaa Door Weyn Ku Lahaan Doona Safarka Musiibada Kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Internetka Waxyaabaha Ayaa Door Weyn Ku Lahaan Doona Safarka Musiibada Kadib » Page 2
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Gudaha, hawlgallada iyo kharashaadka ganacsiga waxaa lagu hagaajin karaa adeegsiga teknolojiyadda IoT. Xog uruurinta dareemayaasha IoT waxay u oggolaan kartaa soo jiidashada dalxiiska inay falanqeeyaan haddii shaqaaluhu ay si siman ugu fidsan yihiin jardiinada mawduuca tusaale ahaan, taas oo yaraynaysa fursadda shaqaalaha qaarkood ay u leeyihiin shaqo xad dhaaf ah taas oo hagaajin karta ballanqaadka hay'adeed. Macaashkaan gudaha wuxuu kaloo abuuraa faa'ido dibadda ah maadaama macaamiishu ay heli doonaan adeeg degdeg ah. Intaa waxaa sii dheer, IoT waxay ka caawin kartaa shirkadaha inay wanaajiyaan hufnaanta tamarta iyo la -dagaallanka isbeddelka cimilada iyadoo la kormeerayo lana hagaajinayo heerkulka, nalalka, iyo guud ahaan isticmaalka tamarta.
Dibedda, IoT waxay kaa caawin kartaa sidii loogu abuuri lahaa khibradaha shaqsiyeed macaamiisha laba siyaabood oo waaweyn. Midda hore waa iyada oo u saamaxaysa dadka socotada ah inay koontaroolaan qalabyo ama adeegyo badan iyada oo loo marayo aalad dhexe, sida kiniin ama codsi guurguura. Marka labaad, shirkadaha kaydiya xogta laga soo ururiyey aaladaha karti u leh IoT si ay u abuuraan ololeyaal suuq -geyn shaqsiyeed oo la beegsaday ama xusuusta dookhyadooda booqashooyinka soo noqoshada.
Iyada oo 82% ka mid ah madaxda safarka iyo dalxiiska ay filayaan hagaajin wax ku ool ah sanadaha soo socda marka la adeegsanayo tikniyoolajiyadda IoT, oo ay weheliso awoodda tiknoolijiyadu u leedahay inay ka dhigto waayo-aragnimada safarka mid COVID-aamin ah, doorka IoT ee dalxiiska ayaa lagu wadaa inuu koro.